Qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda Dawlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan ay ku taageerayaan dowlada degaanka soomaalida Itoobiya kagana Soo Laabteen Aragtidii UBBO waxa ay ku qabteen xarooyiinka Qaxootiga Dhadhaab iyo Xagar Dheere. - Cakaara News
Qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda Dawlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan ay ku taageerayaan dowlada degaanka soomaalida Itoobiya kagana Soo Laabteen Aragtidii UBBO waxa ay ku qabteen xarooyiinka Qaxootiga Dhadhaab iyo Xagar Dheere.
xagardheer-Kenya(CakaaraNews) Axad June 30,2013.Kulan balaadhan oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Xagardheer ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal,Haween,Culumaaudiin,Jaaliyda DDSI ee Kenya iyo dad horay uga tirsanaan jiray Ururada Nabad-diidka Siiba Beenquutayaashii UBBO ee Gabalkeedii Gabaabsaday.
Dhanka kale Kulankan ayaa ay Dhamaanba Qabaha Shacabku si fiican oo Nuxur Qoomamo Huwan u Qaadaa Dhigeen aragtidii Dhaan Daban Gaale ee ay UBBO ku hasaawin jirtay beryaha Qaarkood balse aanu ka bogsanay Ayay yidhaahdeen Markii aanu Daalacanay waxqabadka Xukuumada DDSI Dhinacyada Horumarka iyo kalsoonida Buuxda ee ay noogu baaqday in aanu ku soo biirno Tubta Nabada iyo Horumarka iyo Sida quruxda badan ee ay ula macaamileen maleeshiyaadkii UBBO ee ay DDSI Qabatay wakhti xaadirkaa ahba madax kaalin fiican kaga jirta Qorshayaasha Xukuumada DDSI ayay yidhaahdeen.
Mudane Idiriis Cali qoys oo horay uga tirsanaan jiray UBBO kaalin Xoogana ka qaatay Abaabulka iyo qabsoomida Shirkan ayaa si xeeldheer uga faalooday tabihii Maangaabnimada Huwanaa ee ay UBBO ku majara habaabin jirtay maatada siiba caruurta iyo waayeelka,kana soo burqanaysay 4 Awrkiraale ka ganacsan jiray Daadinta Dhiiga Shacabka balse maanta noqday lax Garaw ku hadhay ayuu yidhi Idiris.
Isku soo wada soohoo dadkan maanta kulankan isugu yimid ayaa u badnaa Xaasaskii,caruurtii,Dhaawacyadi Nabaddiidka UBBO ee joogay xeryaha Qaxootiga ee dalka Kenya ee walaalnimada iyo Deriswanaagu inaga dhaxeeyo.